Iza i Duterte? Podcast andiany “Into The Deep” (Fidirana Lalina) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Novambra 2016 2:52 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Ελληνικά, bahasa Indonesia, नेपाली, Swahili, اردو, عربي, English
Zanaka vehivavy janga no niantsoany ny Papa. Zanaka vehivavy janga no niantsoany an'i Obama, filohan'i Etazonia. Nanaovany vazivazy ny momba ny fanolànana ary tsy misorona izy miteny fa mpanenji-behivavy. Tato anatin'ny efatra volana, ao anatin'ny adiny amin'ny zava-mahadomelina, an'arivony maro ireo maty noho ny filazana azy ireny fa mpivarotra na mpiankindoha amin'ny zavamahadomelina.
Saingy vao ny antsasaky ny tantara fotsiny ihany izany raha ny filohan'i Filipina Rodrigo Duterte no asiana resaka.
Ao anatin'ny andiany anatin'ny Into the Deep ho an'ity herinandro ity, podcast vaovao an'ny Global Voices izay mangady lalina any anatin'ny olana iray izay tsy mahazo ny fandrakofana mendrika azy tokony hataon'ireo media, Mong Palatino sy Karlo Mongaya, mpandray anjara ato amin'ny Global Voices , no manampy antsika hamahavaha ilay antsasany iray hafa amin'ny tantaran'i Duterte.
Ao anatin'ity ampahany ity, ny mozika avy ao amin'ny Tahiry Mozika Malalaka (Free Music Archive) ary mampiasa ny lisansa Creative Commons no nasongadinay, tafiditra amin'izany ireo hiran'i Blue Dot Sessions antsoina hoe Ray Gun – FasterFasterBrighter sy Under Suspicion an'i Lee Rosevere.
Ny sary asongadina anatin'ity tantara ity dia pikantsary avy amin'ilay lalao malaza amin'ny finday “Fighting Crime” (ady amin'ny heloka bevava)
Fanoherana 12 Mey 2022
Mediam-bahoaka 28 Avrily 2022
Hong Kong (Shina) 27 Marsa 2022